Kaadhka xusuusta ayaa tirtiray xog soo kabashada - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>Kaadhka xusuusta ayaa tirtiray xog soo kabashada
Kaadhka xusuusta ayaa tirtiray xog soo kabashada
Tafaftiraha ayaa qof walba xusuusinaya in haddii xogta kaadhka xusuusta ay lunto, dhammaan howlaha qorista waa in si dhakhso ah loo joojiyaa si looga hortago in macluumaadka lumay dib loogu daabaco ka dibna sida ugu dhakhsaha badan loogu soo kabsado. Tallaabada 1: Kaadhka xusuusta kombiyuutarka ku xidha. Haddii aaladda elektiroonigga ah ee uu kaarka xusuusta ku yaallo aan lagu xiri karin kombiyuutarka, waxaad u isticmaali kartaa aqriyaha kaarka inuu ku xiro kaarka xusuusta kumbuyuutarka si loo hubiyo in kaarka xusuusta uu aqoonsado kombiyuutarka. Tallaabada labaad: socodsiiso barnaamijyada xog soo kabashada ee Bplandatarecovery, xulo kaarka xusuusta ee xogta lumay ee softiweerka, ka dibna riix "" si aad u soo ceshato faylasha "" Batoon. Halkan waxaan ku isticmaalaa nooca tijaabada ah ee bilaashka ah ee barnaamijka soo kabashada ee Bplandatarecovery Nooca tijaabada ayaa waliba iskaan kara xogta lumay, natiijooyinka iskaanka ayaa la mid ah nooca la diiwangeliyay. Haddii aadan ka arki karin kaarka xusuusta kumbuyuutarrada 'Bplandatarecovery', waad baddali kartaa dekada USB oo aad dib ula xiriiri kartaa kaarka xusuusta. Talaabada 3: Guji batoonka "bilow" "si loogu ogolaado in kombiyuutarka uu bilaabayo raadinta xog lumay
. Talaabada afraad: dib u eeg faylka. Saxda midig-riix feylka natiijooyinka iskaanka waxaadna doorataa "" Hordhac "", ama laba-guji faylka si toos ah si aad u furto daaqadda sahaminta oo aad hubiso inuu faylku caadi yahay. Soo kabashada xogta kaarka xusuusta
Tallaabada 5: Nuqul faylasha. Nuqul xogta kujira natiijooyinka skaanka kumbiyuutarka kale si ay u dhammaystiraan howsha soo kabashada. Kaadhka Xogta Kaadhka ee Kaadhka xusuusta 2: Kaadhka xusuusta ee La Ballaariyay Sidee loo soo celiyaa Xogta kadib Qaab-dhismeedka? Markaad la kulanto dhibaatooyin aan kaadhka xusuusta la furi karin isla markaana qaabayn degdeg ah loo samayn karin, haddii xogta ku jirta kaadhka xusuusta ay aad muhiim u tahay, waa inaadan fulin hawlgalka qaabka. Habka qaabeynta iyo waxa kale ee loogu yeero howlaha dayactirka waxay u horseedi doonaan waxyeelo macluumaadka lumay waxayna sii kordhin doontaa dhibaatada ka soo kabashada. Waxyaabaha soo socdaa waa gebi ahaanba geedi socodka soo kabashada xogta kaarka xusuusta iyadoo la adeegsanayo barnaamijka Bplandatarecovery:
Tallaabada 1: Kaadhka xusuusta kombiyuutarka ku fur oo furo barnaamijka "Bplandatarecovery". Xulo qeybinta u baahan soo kabashada xogta, ka dibna riix batoonka "" Soocelinta faylka "" badhanka. Soo kabashada xogta kaarka xusuusta
Tallaabada 2: Guji batoonka "Start" ee daaqadda faylka soo-kabashada si aad u gasho nidaamka iskaanka. Ka hor inta aadan bilaabin skaanka, waxaad sidoo kale riixi kartaa "" Xulo Nooca Faylka "" badhanka si aad u cadeyso nooca feylasha inta lagu jiro skaanka qoto dheer. Soo kabashada xogta kaarka xusuusta
Tallaabada 3: Eeg natiijooyinka iskaanka iyo fiirinta faylasha. Laba jeer guji faylka si aad u fiiriso, si aad u arki karto waxa ku jira faylka oo dhammeystiran isla markaana aad hubiso bal in faylka uu waxyeelloobey iyo in kale. Tafaftiraha ayaa kugula talinaya in la daawado feylasha natiijooyinka iskaanka ah mid mid. Talaabada 4: Nuqul faylasha si loogu soo celiyo diskiyada kale. Ka soo kabashada xogta kaarka xusuusta
Tutorial data Tutorial Tutorial 3: Sidee looga soo kaban karaa xogta kaarka xusuusta ee burburay? Mararka qaarkood, haddii kaarka xusuusta leeyahay qaybo xun ama dhibaatooyin kale, iskaanka xog soo-celinta caadiga ah uma shaqeyn doono si sax ah. Xaaladdan oo kale, waxaad ku sameyn kartaa muuqaal heer-kaar ah kaarka xusuusta. Ka dib ku soo celi xogta iyada oo loo marayo faylka sawirka. Tallaabada koowaad: kuxiro kaarka xusuusta kombiyuutarka, ka dibna ku socodsiiso barnaamijka kumbuyuutareedka Bplandatarecovery. Tallaabada labaad: adeegso qaybta nuqulka qaybta si aad u samaysato muraayad muraayad ah kaadhka xusuusta, fadlan tixraac baraha: qaybta koobi /
Tallaabada saddexaad: adeegso " Hawsha "Soocelinta faylka" ayaa iskaa baarta faylka sawirka, ka dibna nuqul ka ah xogta la raadiyay meel kale si loo dhammaystiro soo kabashada. Xusuusin: "" Qaybta Qaybta "" waa howlo ku yaal Bplandatarecovery Edition Edition, Adeegsadayaashu waxay u baahan yihiin inay iska diiwaangeliyaan softiweerka sidii Daabacaadda Xirfadleyda ah ka hor inta aan la isticmaalin; isticmaaleyaasha aan aqoon habkaan dib u soo kabashada si fiican. , Fadlan la xiriir adeegga macaamiisha khadka tooska ah. Soocelinta barnaamijyada kaarka xusuusta waxay ka soo kaban kartaa kaararka xusuusta ee kale duwan sida kaarka SD, kaarka TF, kaarka CF, iwm. Sawirro lumay, fiidyowyo, maqal, dukumentiyo, iwm. Sababo la xiriira cufnaanta tikniyoolajiyadda soo kabashada xogta, waxaa si xoog leh lagula talinayaa in la isticmaalo softiweerka soo kabashada xirfadleyda ah si loo helo natiijooyinka soo kabashada ugu wanaagsan Halkan waxaan kugula talinayaa barnaamijyada soo kabashada xogta ee Bplandatarecovery. Isticmaalka kombiyuutarka Bplandatarecovery, adeegsadayaashu waxay si wax ku ool ah u xallin karaan dhibaatooyinka xog-wareedyada caadiga ah, sida tirtirka shilka, kaarka xusuusta ayaa loo qaabeeyey, kaarka xusuusta lama furi karo mana akhriyi karo, kaarka xusuusta ayaa ku dhiirrigelinaya qaab , Qaybi dhumay, iwm. Ilaa iyo inta faylka lumay aan dib loo qorin isla markaana kaarka xusuusta uusan lahayn wax jireed, faylka lumay si guul leh ayaa looga soo kabanayaa. Software Bplandatarecovery wuxuu leeyahay labo algorithms-raadin oo xog ku dhisan, oo dib uga soo kaban kara faylasha lumay iyada oo loo marayo qaab dhismeedka asalka ah ee faylka, sidoo kale waxay ku sameyn kartaa soo kabsasho qoto dheer iyada oo loo marayo nooca feylka. Habka iskaanka ee softiweerku waa in la soo bandhigo xogta la helay intii skaanka la qaadayo.Haddii xogtii loo baahday la helay, si dhakhso leh u soo celi iyada oo aan sugin dhamaadka skaanka, oo waqti badbaadinaysa. Ka sokow soo kabashada xogta ka luma kaarka xusuusta, softiftarku wuxuu sidoo kale taageeraa aalado kale oo kaydinta xogta ah, sida kumbuyuutarrada kombiyuutarka, diskiga mobilada adag, U diskiga, diskiyada saxda ah (VHD, VMDK, VDI) , RAID, iwm. Intaa waxaa sii dheer, loogu talagalay xirfadlayaasha soo kabashada xogta, waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa qaybta waxqabadka tafatirka ee softiweerka si aad gacantaada uga soo kabato adigoo tafatirka xogta hexadecimal. Maqaalkani wuxuu soo bandhigayaa habka xogta kaarka xusuusta wuxuuna bixiyaa casharro faahfaahsan oo garaafyo ah xaaladaha xaaladaha kaadhka xusuusta ee guud. Markaad la kulanto dhibaatada luminta xogta kaadhka xusuusta, waa inaad si deggan ula tacaasho, oo aad raacdaa tababbarka habboon ee maqaalkan si tartiib tartiib ah loogu soo celiyo. Nooca tijaabada ah ee bilaashka ah ee barnaamijka soo kabashada xogta ee Bplandatarecovery ayaa kaa caawin kara inaad ogaato bal in xogta lumay dib loo soo ceshan karo, iyo geedi socodka soo kabashada oo dhammi ay tahay hawlgal aqrinta, iyo adeegsadayaasha cadaanka ah sidoo kale waxay u adeegsan karaan kalsooni.
PreSida loo soo celiyo kaadhka xusuusta si shil ah loo tirtiro
NextU diskku wuxuu dardar galinayaa "Fadlan gal diskka wadiddiisa", sida loo soo celiyo xogta?